Maxaa Inoo Qabsoomay Maxaase Inaga Qabyo ah | WWW.SOMALILAND.NO
Maxaa Inoo Qabsoomay Maxaase Inaga Qabyo ah
Posted on Febraayo 20, 2008 by Abdirisak Fadal
Waa qormo taxane ah oo aan ku soo gudbin doono duruufaha adag ee ku xeeran bulshada Somalida. Waxa sidoo kale qeyb ka ah waxqabadka iyo waxtarka ay dalkan geliyaan Soomaalida iyo Somalilanderka ku dhaqan oo marka la isku geeyo noqonaya ku dhawaad 20 kun oo qof.
Sida aynu la socono warbaahinta dalkani waxay si joogto ah sawir khaldan uga bixiyaan bulshada Soomaalida ah. Taas oo waxyeelo ba`an ku heysa, daboolkana saarta waxtarkooda dalkan. Way jiraan dhaliilo fara badani xaggooda, haba ugu horeyso habqan baahsan, baylahdooda oo badan iyo iyaga oo aan laheyn cid ay ku mideysan yihiin oo metesha ama lagala xidhiidhi karo.
Haddaba, waxay ugu talo gashay bahda somaliland.no. Inay noqoto qormadan taxanaha ahi goob la isku weydaarsado fikradaha xambaarsan xalka duruufaha ina horyaal. Noqotana Codbaahiyihii gudbin lahaa afkaaraha iyo wax qabadka aynu ku darsano wadankan Norway.
Waxyaabaha kale ee aan wax-qabadkooda ka faaloon doono waxa ka mid ah: Uururada bulsho, Shirkadaha, Meheradaha iyo dadka waxbartay ee aqoontooda kaga qeyb qaata dhismaha bulsho ee dalkan.
Waxa aan ka codsanaynaa dadka waxgaradka iyo aqoonyahankaba leh ee ku nool dalkan inay nagala qeyb qaataan taxanahan. Waxaanan rajeynaynaa in dad badani nala fahmi doonaan waxtarka mowduucani u leeyahay bulshadeena.
Nagala soo xidhiidh e-mailadana:
« Qurbo-joogga SL ee wadamada khaliijka oo madaxweynaha uga digay u saxeexida heshiisyo shidaal baadhiseed shirkadaha sharciyadooda aan la hubin oo xafiisyo uga furan yihiin dalalkan Wakiilka Jamhuuriyada Somaliland Ufadhiya dalka Kenya Iyo Xoghayaha Arimaha Dibada ee Dalka Maraykanka Condoleeza Rice oo Kulan ku Yeeshay Magaalada Nairobi »
Hamsa Mohamed, on Maarso 2, 2008 at 2:08 g said:
Waxaa maalintii khamiistii lagu qabqabtay saddex ruux oo soomaali ah magaaladda Oslo. Dhamaan dadkan ayaa ahaa qaar ka shaqaysta meheradaha sida gaarka ah soomaalida loogu yaqaano ee telefoonadda laga dirto iyo xawaaladaha. Qab-qabashaddan ayaa keentay in saxaafaddu mar kale daba gasho oo ay fiiro gaar ah u yeelato qoomiyadda soomaalida ah ee dalka Norway deggan.